RW Cumar C/rashiid “Waxaan balan qaadayaa inaan madaxweynaha ku wada shaqeyno muwaafaqo” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
RW Cumar C/rashiid “Waxaan balan qaadayaa inaan madaxweynaha ku wada shaqeyno muwaafaqo”
18th December 2014 MAREEG Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com- Ra’iisul Wasaaraha Cusub ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke oo noqday Ra’iisul Wasaarihii saddexaad oo uu wax ka yar saddex sano uu soo magacaabay Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku soo dhisi doono Xukuumad tayo leh.
Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid oo shalay ka hadlayay munaasabada lagu magacaabayay ayaa balan qaaday in isaga iyo Madaxweynaha ay ku wada shaqeyn doonaan si muwaafaqo iyo wada tashi ku dheehan.
“Waxaa balan qaadayaa Madaxweynaha iyo aniga inaan ku wada shaqeyno si muwaafaqo iyo wada tashi ku dheehan, kalsoonida umadana kor u qaado, amniga wadankana aan gaarsiino meel umada soomaaliyeed ku riyaaqdo”ayuu yiri Cumar Cabdirashiid.
Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid oo sii hadlayay ayaa yiri “Sida ugu dhakhsiyaha badan ayaa Xukuumad ku soo dhisi doonaa, anigoo la tashanaya Madaxweynaha, Gudoomiyaha Baarlamaanka, kuxigeenada, xildhibaanada, Umada Soomaaliyeed iyo gobolada si loo helo dowlad dadka iyo dalka u shaqeysa, waqtigana waa yar yahay”
Mr Cumar Cabdirashiid ayaa ka codsaday Baarlamaanka inuu ka gacan ka siiyo si ay howsha ugu fududaato, isla markaana uu dib barnaamijkiisa dowladda uu ka soo bandhigi doono sida uu yiri.
Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid ayaa markii labaad muddo shan sano gudahood loo magacaabay xilka Ra’iisul wasaare, iyadoo 13-kii bishii Febraayo sanadkii 2009 ay aheyd markii Madaxweyne Shariif uu u magacaabay markii u horeysay xilka Ra’iisul Wasaare ee dalka, waxaana shalay oo ay taariikhdu aheyd 17-ka December 2014 uu Madaxweyne Xasan Sheekh uu u xushay ninka uu u magacaabay Ra’iisul Wasaare.
Saraakiil u kala dhashay Imaaraadka Carabta iyo Masar oo ku dhintay shil diyaaradeed
Ciidamada dalka Sierra Leone oo si rasmi ah uga baxaya Soomaaliya